जाप र गोर्खालीगलाई वार्तामा सामेल गरिएन्- डा. छेत्रीले जीएमसीसीलाई लिखित स्पष्टिकरण मागियो
Saturday , June 23 , 2018 9:59AM
जाप अध्यक्ष हर्कबहादुर छेत्रीले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै
सिलगढ़ी 13 अगस्त-केन्द्र सरकारले बोलएको वार्तामा जाप पार्टीको प्रतिनिधिलाई लगिएन्। जाप अध्यक्ष हर्कबहादुर छेत्रीले प्रश्न गर्दै भने हामी दिल्लीमा महत्त्वपूर्ण बैठककोमा जापलाई किन सामेल गरिएन भन्दै जीएमसीसीलाई लिखित रूपमा स्पष्टिकरण माग्ने भएको छ। शनिबारको जीएमसीसीको बैठकमा जापका प्रतिनिधिहरू पनि उपस्थित थियो। त्यस बैठकमा दिल्लीको बैठकबारे कुनै कुरा नै भएन। कल्याण देवानलाई जापका प्रतिनिधि टासी शेर्पाले फोनबाट जानकारी लिँदा जीएमसीसीलाई हामी प्रतिनिधित्व गर्छौँ’-भन्ने देवानबाट उत्तर पाए पछि जाप जीएमसीसीसित असन्तुष्ट बनेको छ। साथै जाप मात्र होइन अखिल भारतीय गोर्खालीगलाई पनि बैठकको खबरसमेत दिएको छैन्।
जीएमसीसीमा जापको उपयोगिता छैन भने स्पष्ट रूपमा बताओस् डा. छेत्रीले पत्रकार सम्मेलन डाकेर भने, ‘हामी पनि सँगै काम गरिरहेका छौँ, तर भेदभाव चाहि किन? जापलाई दिल्लीमा किन लगिएन भन्ने विषयमा आफूहरू अनभिज्ञ रहेको छेत्रीले बताए। जापलाई नलगिएको सम्बन्धमा पछिबाट हामी स्पष्टिकरण माग्ने छौं। बैठक बोलाएको हामी खुशी छौं, जनताको आकांक्षामाथि आघात पुग्ने सम्झौता नहोस्। जीएमसीसी टोलीलाई शुभकामना दिँदै जनताको आकांक्षासित खेलवाड नहोस् भन्दै चेताउनी पनि दिएका छन् डा. छेत्रीले।
गोर्खालिग महासचिव प्रताप खातीले भने, यो गोर्खाल्याण्ड पाउने सङ्केत होइन। गोजमुमोले कुनै व्यवस्थामा सम्झौता गर्ने प्रयास गरिरहेको हुनसक्ने गोर्खालीगको शङ्का छ। केन्द्रिय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहसितको बैठकमा जीएमसीसीसित चारदवटा दल मोर्चा, क्रामाकपा, गोरानिमो र गोरामुमोले मात्र रहेको छ। कङ्ग्रेस, भागोप, जाप, गोर्खालीग साथै अन्य सङ्घ-संस्थाहरूबाट पनि कुनै प्रतिनिधिलाई बैठकमा लगिएको छैन। यसैले देखिन्दै छ कि जीएमसीसीभित्रै नै विवाद शुरू हुने निश्चित देखिन्दै छ।
एनजीसीले विपक्षीको मन बुझ्न कालेबुङमा बैठक
वरिष्ठ लेखक माधव बुढ़ाथोकीलाई पुरस्कार प्रदान
3 सौ जनालाई पर्चापट्टा दिने घोषणा, पहाडमा विकास चाहन्छु : ममता व्यानर्जी
पहाड़ीक्षेत्रको डाकघरहरू अनिश्चितकालीन बन्द
Visits : 125206